Vaovao - Ahoana ny fomba hiatrehana ny polarization mifantoka amin'ny membrane osmosis
Ahoana ny fomba hiatrehana ny polarization mifantoka amin'ny membrane osmosis
Ny rafitra osmosis miverimberina dia ampahany tena ilaina amin'ny fitaovana fitsaboana rano mandeha ho azy tena kely sy salantsalany, saingy misy ihany koa ny loza miafina ao amin'ny rafitry ny osmosis miverimberina, izany hoe, ny velaran'ny fonon'ny osmosis miverimberina dia mora mamorona polarization mifantoka amin'ny solute na akora hafa tazonina, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny fitaovana fitsaboana rano.
1. Fomba fampitomboana haingana
Voalohany indrindra, azontsika atao ny mandray ny fepetra mahazatra ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika mba hampitombo ny korontana. Izany hoe, miezaha mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny tsiranoka mikoriana mamakivaky ny velaran'ny membrane. Ny fotoana adsorption ny solute dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana ipetrahan'ny tsiranoka ary hampiakarana ny hafainganan'ny tsiranoka amin'ny fitaovana fitsaboana rano mandeha ho azy kely sy salantsalany.
2. Fomba fanangonana
Ohatra, 29 ~ 100um spheres dia atsofoka ao anaty tsiranoka voatsabo ary mikoriana miaraka amin'ny rafitry ny osmosis miverimberina izy ireo mba hampihenana ny hatevin'ny soson'ny sisin'ny membrane ary hampitombo ny hafainganan'ny fifindrana. Ny fitaovan'ny baolina dia azo vita amin'ny vera na methyl methacrylate. Ankoatr'izay, ho an'ny rafitra osmosis miverimberina tubular, ny baolina sponjy micro dia azo fenoina ihany koa ao anaty ranon-tsakafo. Na izany aza, ho an'ny takelaka fonosana karazana takelaka sy takelaka, ny fomba fampidirana mpanenjana dia tsy mety, indrindra noho ny loza mety hitranga amin'ny fantsona mikoriana.
3. Fomba pulse
Ny mpamorona pulsa dia ampiana amin'ny fizotran'ny fitaovana fitsaboana rano. Ny amplitude sy ny fahita matetika amin'ny pulsa dia tsy mitovy. Amin'ny ankapobeny, ny lehibe kokoa ny amplitude na ny matetika, ny lehibe kokoa ny hafainganam-pandehan'ny. Ny agitatera dia be mpampiasa amin'ny fitaovana fitsapana rehetra. Ny fanandramana dia mampiseho fa ny coefficient famindrana faobe dia manana fifandraisana mivantana miaraka amin'ny isan'ny revolisiona ny mpamporisika.
4. Fametrahana mpampiroborobo korontana
Ireo mpampiroborobo ny korontana dia sakana isan-karazany izay afaka manatsara ny lamina mikoriana. Ohatra, ho an'ny singa tubia dia apetraka ao anatiny ny baffle spiral. Ho an'ny takelaka manify na takelaka fonosana, ny harato sy ireo fitaovana hafa dia azo alahatra hampiroborobo ny korontana. Ny vokatr'ilay mpampiroborobo korontana dia tena tsara.
5. Ampiasao ny inhibitor mivezivezy
Mba hisorohana ny fonosana osmosis miverimberina tsy hitombo amin'ny fitaovana fitsaboana rano dia asiana asidra solifara na asidra hidroklorika hanitsiana ny sandan'ny pH. Na izany aza, noho ny fahasimbana sy ny fivoahan'ny rafitra asidra, dia misavoritaka ny mpandraharaha, noho izany dia ampiana ny mpanakana ny ambaratonga miparitaka mba hitazomana ny fiasan'ny rafitra fitsaboana rano.